Androids ma ku riyoodaan Idaha korontada? | Laga soo bilaabo Linux
Androids ma ku riyoodaan Idaha korontada?
Tina Toledo | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux
Dhamaan daqiiqadahaas ayaa lumi doona waqtiga sida ilmada roobka.
Waa waqtigii la dhiman lahaa "
Roy (android ka Blade Runner)
Waxaa qoray 1968 qoraaga Philip K. Dick shaki la’aan waa mid kamid ah sheekooyinka ugu wanaagsan ee sheekooyinka sayniska. Waxay ku taalaa adduun-apocalyptic-ka iyo duni burbursan, oo laga tagay, halkaasoo tiknoolajiyaddu ay meel walba ka jirto, bini'aadamku horeyba wuxuu mas'uul uga ahaa baabi'inta ku dhowaad dhammaan noocyada nolosha ee dhulka, sidaas darteed haysashada iyo daryeelka xayawaanka waxaa loo tixgeliyaa wanaag bulsho iyo astaan ​​bulsho xaalad, iyadoo kuxiran naadirnimada noocyada.
Teknoolojiyaddu waxay gaadhay horumar noocan oo kale ah oo ay suurtogal tahay in la abuuro aaladda loo yaqaan androids, sidaa darteed waxay la mid tahay bini-aadamka si marka loo kala duwanaado midka kale, waa inay maraan tijaabooyin adag oo lagu ogaanayo inuu dad yahay iyo inuu yahay qof macmal ah. Waana xitaa marka bani'aadamnimadu horumar weyn ka gaadhay sayniska, tayadiisa akhlaaqeed weli waa laga doodi karaa. Aaladda loo yaqaan 'androids' ee ay samaysteen waxay rabaan, ka fikiraan oo dareemaan shucuur la mid ah abuurayaashoodii laakiin, tan ugu xun, ayaa ah in miyir qabkaas ay ogaadeen in loola dhaqmayo sidii addoommo. Qaar badan oo ka mid ahi waxay ka baxsadaan iyagoo raadinaya hab nololeed ka wanaagsan, maxaa yeelay waxay kaloo soo baxday in in badan oo iyaga ka mid ahi ay iyaguna ka caqli badan yihiin aadanaha laftiisa. Xaqiiqadani waxay xaq ka dhigeysaa abuuritaanka koox calooshood u shaqeystayaal ah oo ugaarsada ugaarsada androids-ka baxsadka ah ee loo yaqaan blade runners.
Ma garanayo haddii ay androids ku riyoonayaan ido adhi koronto leh, laakiin waxa aan hubo ayaa ah in, uguyaraan, kumbuyuutarrada aan adeegsado ay qayb ka yihiin miyir-qabka wadajirka ah ee markay "riyoonayaan", i tusaya midabbo qurxoon iyo sawirro laga sameeyay boqolaal, laga yaabee kumanaan… Ma aqaan, kombiyuutarada kale, oo sida tayda oo kale ah, sidoo kale riyada. Riyoodkan wadajirka ah ee android-ka ah waxaa loo yaqaan Idaha Korontada waana mid ka mid ah shaashadda quruxda badan ee adduunka keliya lagu ilaaliyo GNU / Linux laakiin guud ahaan: kombiyuutar kasta oo barnaamijka lagu rakibo, iyadoon loo eegin nidaamkiisa hawl, wuxuu leeyahay xiriir, iyada oo loo marayo internetka, dhammaantoodna waxay abuuraan maskax maskaxeed midabbo leh iyo sawirro muuqda.
Ku rakibidda barnaamijka waa u fududahay sida teeb-qorista boosteejada sudo apt-hel rakib koronto ama kala soo bax bogga rasmiga ahKadibna, waxay ku hartaa oo kaliya in loo qaabeeyo sidii shaashaddeena caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Androids ma ku riyoodaan Idaha korontada?
Weligey sidan ma arag, waan kacaa oo koofiyad baan iska siibaa ,,,
waxay madaxayga u timid inaan Saciid ka saaro Mushroom-ka Infekshanka leh oo fiidiyoow ah oo leh wareegga mid ka mid ah fiidiyowyadaas
Habka asalka ah ee lagu soo bandhigo shaashad noocaas ah. Waxa aan ugu jeclahay ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah qabashadaas ay i xasuusiyaan nebulae bannaan, galaxyo ku jira qulqulatadooda ba'an, mugdiga mugdiga ah ee aan la qiyaasi karin ...
Marka laga hadlayo Bixiyaha, waxaan ka baqayaa inaan ku arkay waqti xun, maxaa yeelay waxay ku fashilantay inay i argagaxiso (waxaa laga yaabaa inaan markale isku dayo). Si kastaba ha noqotee, taxanaha Battlestar Galactica, oo ka hadlaya fikrad aad u eg, ayaa si aan macquul ahayn ii soo jiitay bilow ilaa dhammaad.
Guud ahaan, arinta mashiinada damiirkooda u gaarka ah ayaa i cajab galiyay, sidoo kale waxay umuuqataa mid aad khatar u ah, mana ahan naftooda darteed, laakiin waxaa ugu wacan xadgudubyada noocyadeenna ay ku qaadaan wax kasta oo hareeraheeda ah iyo in, aakhirka, iyagu u adeeg si aad ugu guuleysato cadaawada muuqata.
Marka la eego waxa aan isku dayayo inaan muujiyo ayaa ah in bini aadam ahaan aan ku guuleysan karno horumar farsamo oo la yaab leh, laakiin ugu dambeyntii waxaan ku dhamaaneynaa qalloocinta wax walba. Waan wada hadalnay Elav waxaanan u maleynayaa inay tani cashar noo tahay: koox kambiyuutarro ah ayaa wada riyooda iyadoon loo eegin haddii nidaamkooda hawlgalka uu yahay iyo in kale Daaqadaha, MacOSX o LinuxInnaga, innaga oo isku malaynayno inay noqdaan mufakiriin, aan ka dul dagaallano.
Waxaan nahay naf-hure iyo rabshad abuur, karti u leh kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu xun. United waxaan xallin karnay dhibaatooyin badan oo adduunka ka jira, laakiin waxaan door bidnay inaan u dagaallanno waxba oo aan sii wadno dabaasha khilaafka. Taasi waa sababta aan had iyo jeer wax u weydiiyo caqliga loo maleynayo inuu na sifeynayo, waxaanan la mid dhigaa horumarkeenna akhlaaqeed iyo kan cawska. Bulshadu waxay ina bini-aadamnimada ka dhigtay, taas oo wali ah wax iska hor imanaya, oo intii aan ka soo kaban lahayn wixii lumay, waxaan u ogolaaneynaa nafteena in ay naloo qaado xilligan xad dhaafka ah ee wanaaga hadheeyay xumaanteenu.
Waxaa laga yaabaa inay tahay dhammaan khaladka Jiilka Is-huwan ee Richard Dawkins ka hadlayey; laga yaabee, ka dib oo dhan, weli waxaan haysannaa waxyaabo badan oo aan baranno oo aan horumarinno. Waan heli doonnaa? Rajo sidaas.
Aadanaha waa abuur aad u yaab badan. Dabcan, weli wax badan ayaa noo hadhay, si aan wax u baranno, illaa iyo inta aan u oggolaanno, maxaa yeelay innaga qudheennu ayaa meereynkan soo afjaraynaa (sida muuqata qaar baa weli rajeynaya inay ka helaan meel ka mid ah Galaxy si ay u beddelaan).
Eeg sida aan nahay, in xitaa annagoo og xumaanta inna saameysa, aan sii wadno inaan isla sidaas yeelno. Tusaale fudud ayaa ah sida aan ugu ciyaarno caafimaadkeena. Waan ognahay in sigaarku waxyeelo u leeyahay jirkeena, xitaa xirmooyinka ay ku yimaadaan waxay leeyihiin fariin nooga digaya: Sigaar cabiddu waxay dhaawacdaa caafimaadkaaga, iyo xitaa sidaas, waan sii wadeynaa inaan soo iibsanno .. ma sameeyo, ma cabo sigaar .. ¬¬
Oo sidaasaannu ula taaganahay wax kasta oo nolosha ah. Taasi waa sababta filimada sida Wally, I Robot iyo wixii la mid ah ay ii dhaqaajiyeen, halkaas oo mashiinadu caddeeyeen inay aad nooga fiican yihiin.
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay. Waxaan u maleynayaa in nidaamku naga fogeeyo qaab gaar ah, isagoo lacag ka hor marinaya qiimaha dadka. Haddii aan ku noolaan lahayn adduun halkaas oo horumarka, bey'ada, antispeciesism, farshaxanka, karaamada aadanaha si dhab ah loo dhiirigeliyey ... diiq kale ayaa gabyi lahaa. Marka si loo hadlo, maskax "linux" ah oo lagu dabaqay bulshada, taas oo horumarka ama "runta rasmiga ah" aan hoos imaanaynin danaha dhaqaale - uguyaraanna si xad dhaaf ah loo calaamadeeyay.
Waa wax laga xumaado in la arko in ay jiraan jasiirado waawayn oo qashin ah oo ku jira badaha iyo dawladaha oo ay warbaahintu dhaafto; Waxay la mid tahay shidaalka shidaalka laga helo: beddelka ma aha mid faa'iido leh, sidaa darteed waxay doorteen inay sii wadaan dhaca hantida adduunka. Ma helayo. Laakiin waxaa jira dad adduunka u arka si ka wanaagsan, waxaanan rajaynayaa in si dhakhso leh ama goor dambe ay taasi noo oggolaan doonto inaan ka baxno ceelka oo aan u soconno dhanka mustaqbalka oo is waafajin ah.
Sheekadu waxay i xasuusineysaa silsiladdii anime ee loo yaqaan Animatrix - Dhalashada - Qeybta 1 iyo 2
Ma jiraa qof gelin kara shaashadda sida tani u ekaan doonto? T_T
Horay ayaan usameeyay mowduuca waxaanna soo geliyay fiidiyoow aad ku aragto ficil ahaan.
Inta lagu gudajiro ilbiriqsiyo gaaban waxaad arki kartaa Qalooca Heighway (ama masduulaa jajab), daqiiqad 1:10; iyo 1:20 masduulaagii Mandelbrot ayaa u muuqda. Waxaan sidoo kale arkay qaar ka mid ah noocyada Julia iyo kuwa la mid ah kuwa soo jiidatayaasha ah. Qaar badan oo ka mid ahi waa garaafyada hawlaha is-bedbeddelka (joogto ah ama soo noqnoqda) oo diyaaraddoodu aysan u dhigmin integer ama qiyaas jajab tobanle ah oo qiimahoodu u eg yahay tiro la'aan.
Haddii aad rabto macluumaad intaa ka badan inta aan ka faalloodo, waxaad eegi kartaa wiki 😉
Kuma fahmin, waana sababta aan kuu xushmeeyo O___O
hehehe, mowduucyo xisaabeed aad u xiiso badan tan iyo markii garaafyadooda ay abuureen farshaxan noocan ah 😉
Waan hubaa in fiidiyowyadaas lagu sameeyay 'aphopysis'. Qalab aan caadi aheyn oo waliba ah OpenSource.
Oo halkan waa mid ka sii yaab badan.
weyn, waad ku mahadsan tahay mawduuca
Isla markiiba waxaan galay bogga oo aan soo dejiyey, dabcan. Mahadsanid!
Si kastaba ha noqotee, dareenka ay i siiso wuxuu aad ugu eg yahay waxa uu i siiyay. Jawiga la abuuray shaki la’aan waa mid xiiso leh laakiin waxaa gabi ahaanba mugdi geliyay dareenka murugada ee ay ku soo saarayso mid kasta iyo cutub kasta. Iyo, in kastoo aan jeclahay Dick waxaan door bidaa Asimov. 🙂
Laga yaabee inaan mar uun adeegsan doono, anigu garan maayo, laakiin hadda waxaan kusii wadi doonaa sawirkii aan sannadaha badan isticmaali jiray. Bad deggan, hiwaayad leh, iftiin dayax leh inta gadaal ka muuqata waxay u muuqataa xeeb dhanka, ugu yaraan riyooyin ah, aan u shiraacdo.
Kadib cutubkan ugu dambeeya, kaliya muusiga violin ayaa la la'yahay, sax? LOL
Gebi ahaanba soo dhowow!
Runtu waxay tahay waa wax lagu farxo inaan halkaan kugu aqriyo saaxiib qaali ah, waxaan hubaa inaad faallooyinkaaga ku biirin doontid waxyaabo wanaagsan oo badan.
iyo sidee loogu xiraa xfce?
Waan rakibey, waxaan tagayaa liiska shaashadda mana muuqato
Cajiib! Xaqiiqdii wax fikrad ah kama haysto ... Aad uma lihi xfce, laakiin waxaan hubaa in qof ka socda blogga uu ku caawin doono.
jidka agtiisa, sawirkaas wuxuu iila muuqdaa sida xayeysiinta subliminal ee antivirus-ka madaxa
Horaan u idhi waxay i xasuusisay wax ahaha.
ESET qaaday sawirka filimka Waxaan Robot 2004 -http: //www.impawards.com/2004/posters/i_robot.jpg- iyo markiisa, naqshadeeyaha muuqaalka filimka wuxuu ku saleysnaa iMacs si aad u abuurto androids-kaaga.
Qoraal wanaagsan iyo waliba akhlaaqiyaadka ay inaga tegeyso.
+ xad la'aan
Mahadsanid TINA, Ma noqon kartaa JACAYL # nabad # jacayl #marley
Uff, waxaan u maleynayaa in saaxiibkey Oleksis la afduubay oo loo beddelay wax farsamo 0.o Hahaha nin, halkan waxba kuma qabanayno hashtags ..
Boosto aad u fiican, gaar ahaan hordhaca, iyo barnaamijku waa mid layaableh, laakiin ma kala duwanaan karo sanduuqa furan si aan u isticmaalo shaashad ahaan, qof ma ii sheegi karaa qaab aan ku sameeyo? Aad baad u mahadsantahay horay, waxaan ahay qof raacsan aaminka maqaalka ka yimid Argentina. Farxad!
Adeegso qalabka MFP iskaanka
Waxaa loo heli karaa soo dejinta Mageia 2 Beta 2